विहेको सातौं एनिभर्सरी मनाउँदै हमाल दम्पत्ति : यस्ता छन् निकट भविष्यका योजना - नागरिक खोज
विहेको सातौं एनिभर्सरी मनाउँदै हमाल दम्पत्ति : यस्ता छन् निकट भविष्यका योजना
४ हप्ता अगाडि • २८५ पटक पढिएको
काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमाल र पत्नी मधु सोमबार विहेको सातौं वर्षगाँठ सेलिव्रेसन गर्दैछन् ।
५६ वर्षे हमाल र ३३ वर्षे मधु भट्टराईलाई ‘पावरफूल कपल’ पनि मानिन्छ । लामो समयको सम्बन्धलाई विहेमा परिणत गरेको यो जोडी अहिले पनि उत्तिकै रोमान्टिक मानिन्छ ।
यो जोडी भविष्यलाई लिएर उत्तिकै आशावादी पनि छ । फ्यामिली प्लानिङदेखि फिल्म हुँदै समाजसेवा गर्ने हमालका योजना छन् । तर, तत्काल बच्चा बनाइहाल्ने योजना उनीहरुको छैन ।
तत्काल फ्यामिली बनाइहाल्ने पक्षमा नभएपनि उनीहरु सन्तानको योजनामा चाहिँ छन् । ‘सन्तान भएपनि ठीक र नभएपनि ओके मुडमा उहाँहरु हुनुहुन्छ’ हमाल निकट पारिवारिक स्रोतले भन्यो, ‘तत्काल फ्यामिली प्लानिङ गर्ने योजना चाहिँ छैन ।’
हमालले नेपाल प्रेससँग यसअघि पनि फ्यामिली प्लानिङबारे खुलेर बोलेका थिएनन् । उनले त्यसलाई भगवानको इच्छा भए हुने भन्दैै टार्न खोजेका थिए ।
निकट भविष्यमा हमाल मोटिभेसनल स्पिकरको रुपमा देश दौडाहामा निस्कने भएका छन् । सबै जिल्ला पुगेर युवाहरुलाई प्रेरणादायी प्रवचन दिने उनको योजना छ । ‘उहाँ मोटिभेसनल स्पिकरको रुपमा देश भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ’ स्रोतले भन्यो ।
हमाललाई अहिले मधुको साथ छ । खानेपिउनेदेखि जीवनका अन्य योजनामा मधुले उनलाई सघाएकी छिन् । लामो समयको ग्यापपछि हमाल फिल्ममा कमब्याक हुनुमा मधुको भूमिका छ । मधुले नै प्रेरित गरेपछि हमालले फिल्ममा पुनरागमन गरेका थिए । अहिले मधु हमालको सबै पक्षको ख्याल राख्छिन् ।
बिराटनगरकी मधु र काठमाडौंका राजेश हमाले विहे लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए ।
कस्तो अचम्म ! यति राम्री बिदेशी चेलिले नेपाली सरकारी स्कुलमा यसरी पढाउदै ,नेपाली प्रष्ट बोल्छिन् (हेर्नुस् भिडियो )
धेरै पारिश्रमिक लिने नेपाली नायिकाहरु, सबैभन्दा धेरै कसले लिन्छ ? हेर्नुस |
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो, भिडियो सहित
मायामा उमेरले छेक्दैन भन्ने भनाइलाई सहि साबित गर्दै आफुभन्दा सानोसँग बिहे गरेका ५ नेपाली नायिका ।(तस्बिरसहित)